OTU ESI AGBANWE AHA NA TWITTER - TWITTER - 2019
Mgbe ufodu, odi nkpa ichota otutu edere di n'ime cell. N'ezie, naanị ị nwere ike iji aka gị gbakọọ aka, mana ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ihe dị icheiche, ma a ghaghị ime atụmatụ ya na agbanwe agbanwe ọdịnaya maka ụfọdụ ebumnuche? Ka anyị mụta otú e si agụta ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ edemede na Excel.
Na-agụta ihe odide
Maka njirimara agwa na Excel, enwere ọrụ pụrụ iche a na-akpọ "DLSTR". Ọ bụ ya na enyemaka ya na ị nwere ike ichikota ihe ịrịba ama na otu mmewere nke mpempe akwụkwọ ahụ. Enwere otutu ụzọ iji ya.
Usoro 1: gụọ ihe odide
Iji gụọ ihe niile edere na cell, jiri ọrụ ahụ DLSTR, ya mere ikwu okwu, na "ụdị dị ọcha".
Họrọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nke a ga-egosipụta nsonaazụ ọchụchọ. Pịa bọtịnụ "Tinye ọrụ"emi odude ke enyọn̄ window ke ubọk ufien ke n̄kpan̄wed emi.
Amalite ọrụ ọkachamara. Na-achọ aha na ya DLSTR ma pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Nke a bụ mmalite nke windo arụmụka. Ọrụ a nwere naanị otu esemokwu - adreesị nke otu cell. Ọzọkwa, a ghaghị icheta na, n'adịghị ka ndị ọrụ ndị ọzọ, nke a anaghị akwado ịbanye na mkpụrụ ndụ dịgasị iche ma ọ bụ ka e nwee usoro. N'ọhịa "Ederede" jiri aka tinye adres nke mmewere nke ịchọrọ ịgụpụta ihe odide ahụ. Ị nwere ike ime ya n'ụzọ dị iche, nke ga-adị mfe maka ndị ọrụ. Debe cursor na arụmụka arụmụka wee pịa mpaghara achọrọ na mpempe akwụkwọ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, adreesị ya ga-apụta n'ọhịa. Mgbe data batara, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị nwere ike ịhụ, mgbe nke a gasịrị, a na-egosipụta nkwụpụta nke ịgbakọ ọnụ ọgụgụ nke ihe odide na ihuenyo.
Usoro 2: Gụọ ihe odide na kọlụm
Iji gbakọọ ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ edemede na kọlụm ma ọ bụ na mpaghara data ọ bụla ọzọ, ọ dịghị mkpa ịkọwapụta usoro maka sel nke ọ bụla.
Anyị na-abanye na nri aka nri nke cell na usoro. Ihe nchọta akara ka egosiri. Jide bọtịnụ òké aka ekpe ma dọpụta ya na mpaghara ebe anyị chọrọ ịgụ ọnụ ọgụgụ nke ihe odide.
E depụtaghachiri usoro ahụ n'ozuzu ya. A na-ahụ ya ozugbo na mpempe akwụkwọ ahụ.
Nzọụkwụ 3: Gụọ mkpụrụ ndụ na ọtụtụ sel site na iji nkwụnye ego
Dịka e kwuru n'elu, njikwa arụ ọrụ DLSTR naanị nhazi nke otu cell nwere ike ịpụta. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakọ ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe odide na ọtụtụ n'ime ha? Maka nke a, ọ dị mma iji ọrụ akpaaka.
Anyị na-agbakọ ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụokwu maka sel nke ọ bụla, dịka akọwapụtara na mbipute gara aga.
Họrọ nhazi nke egosire nọmba nke mkpụrụedemede, ma pịa bọtịnụ ahụ. "Ego"dị na taabụ "Home" na igbe ntọala Na-edezi.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-egosipụta ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe odide nke ihe niile dị na cell dị iche na-esote nhọrọ nhọrọ.
Ihe omumu: Kedu ka esi tụọ ego na Excel
Usoro 4: na-agụta ihe odide na ọtụtụ sel site na iji ọrụ ahụ
Na usoro a dị n'elu, ịkwesịrị ịmepụta ngụkọta nke ihe omume ọ bụla n'otu oge ma weezie ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke mkpụrụedemede na mkpụrụ ndụ niile. Ma enwerekwa otu nhọrọ nke a ga-eme nyocha niile n'ime otu n'ime ha. N'okwu a, ịkwesịrị itinye usoro dị iche iche na-eji onye ọrụ SUM.
Họrọ mpempe akwụkwọ nke a ga-egosipụta ya. Tinye usoro dị na ya dị ka template:
Mgbe arụ ọrụ na adreesị nke mkpụrụ ndụ niile, ọnụ ọgụgụ nke ederede ịchọrọ ịgụta, abanyela, pịa bọtịnụ ahụ Tinye. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe odide a gosipụtara.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ụzọ ịgụta ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ edemede na mkpụrụ ndụ nke mmadụ, na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ihe odide na ihe niile dị iche iche. Na nke ọ bụla nhọrọ, a na-arụ ọrụ a site na iji ọrụ ahụ DLSTR.